Dị ka onye were gị n'ọrụ, ị nwere ike jụ ịkọsara onye ọrụ gị ọrịa? | Law & More B.V.
blog » Dị ka onye were gị n'ọrụ, ị nwere ike jụ ịkọsara onye ọrụ gị ọrịa?
Dị ka onye were gị n'ọrụ, ị nwere ike jụ ịkọsara onye ọrụ gị ọrịa?
Ọ na - eme mgbe niile na ndị were gị n’ọrụ nwere obi abụọ gbasara ndị ọrụ ha na - akọ banyere ọrịa ha. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na onye ọrụ na-akọkarị ọrịa na Mọnde ma ọ bụ Fraịdee ma ọ bụ n'ihi esemokwu ụlọ ọrụ. A na-ahapụ gị ka ị jụọ akụkọ gbasara ọrịa onye ọrụ gị ma kwụsịtụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa ruo mgbe emere ka ọ mata na onye ọrụ ahụ na-arịa ọrịa? Nke a bụ ajụjụ dị mkpa ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n’ọrụ na-eche ihu. Ọ bụkwa ihe dị mkpa maka ndị ọrụ. Ha bụ, n'ụkpụrụ, nwere ikike ịnọgide na-akwụ ụgwọ ego na-enweghị ọrụ ọ bụla a na-arụ. Na blọọgụ a, anyị ga-eleba anya n'ọtụtụ ọnọdụ ịma aka nke ị nwere ike ịjụ mkpesa ọrịa nke onye ọrụ gị ma ọ bụ ihe kachasị mma ịme na enwere obi abụọ.
Emebeghị ọkwa ọrịa ahụ dabere n'ụkpụrụ usoro ndị dị adị
N’ozuzu ya, onye ọrụ were ịkọwara onye were ya n’ọrụ banyere ọrịa ya n’onwe ya na okwu ọnụ. Onye were ya n'ọrụ nwere ike ịjụ onye ọrụ ya ogologo oge a na-atụ anya ọrịa ahụ ga-adịgide ma, dabere na nke a, enwere ike ịme nkwekọrịta gbasara ọrụ ahụ ka ọ ghara ịnọgide na-edina. Ọ bụrụ na nkwekọrịta ọrụ ma ọ bụ usoro iwu ọ bụla nwere ike ịnwe ụkpụrụ ndị ọzọ gbasara ịkọ ọrịa, onye ọrụ ga-agbaso usoro iwu ndị a. Ọ bụrụ na onye ọrụ anaghị agbaso iwu ndị akọwapụtara na-arịa ọrịa, nke a nwere ike itinye aka na ajụjụ a ma gị onwe gị, dịka onye were gị n'ọrụ, ajụwo nkwupụta ọrịa nke onye ọrụ gị.
Were n'ọrụ na-adịghị na-arịa ọrịa onwe ya, ma na-akọ na-arịa ọrịa
Oge ụfọdụ, ndị ọrụ na-ekwu na ha na-arịa ọrịa mgbe ha onwe ha anaghị arịa ọrịa ma ọlị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike icheta ọnọdụ nke onye ọrụ gị na-ekwu na ọ na-arịa ọrịa n'ihi na nwa ya na-arịa ọrịa na enweghị ike ịhazi onye na-elekọta ya. Na ụkpụrụ, onye ọrụ gị anaghị arịa ọrịa ma ọ bụ enweghị nkwarụ maka ọrụ. Ọ bụrụ n’ị nwere ike ịchọpụta nkọwa onye ọrụ gị na ọ nwere ihe ọzọ kpatara, ma e wezụga nkwarụ ọrụ nke onye ọrụ gị, nke na-egbochi onye ọrụ ịbịa ọrụ, ị nwere ike jụ ịkọ ọrịa. N'ọnọdụ dị otú a, biko buru n'uche na onye ọrụ gị nwere ike ịnwe ikike ịhapụ ọdachi ma ọ bụ ezumike ezumike na-adịru nwa oge. Ọ dị mkpa ka ị kwenye n'ụzọ doro anya ụdị nke ịhapụ onye ọrụ gị ga-ewere.
Were n'Ọrụ na-arịa ọrịa, mana ọ na-emebu ihe omume ka nwere ike rụrụ
Ọ bụrụ na onye ọrụ gị kwue na ọ na-arịa ọrịa, na ị nwere ike ikwubi na mkparịta ụka na enwere ọrịa n'ezie, mana na ọ dị oke njọ na enweghị ike ịrụ ọrụ a na-ahụkarị, ọnọdụ ahụ siri ike karịa. Ajụjụ bụzi ma enwere ike ịrụ ọrụ. Onye ọrụ enweghị ike ịrụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na, n'ihi nkwarụ anụ ahụ ma ọ bụ nke ọgụgụ isi, ọ gaghịzi enwe ike ịrụ ọrụ ọ kwesịrị ịrụ dịka nkwekọrịta ọrụ ahụ. Nwere ike icheta ọnọdụ nke onye ọrụ gị ghachara nkwonkwo ụkwụ ya, mana ọ rụọlarị ọrụ ịnọdụ ala. Na ụkpụrụ, Otú ọ dị, onye ọrụ gị ka nwere ike ịrụ ọrụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịme ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị. Ihe kachasị nghọta bụ ịme nkwekọrịta banyere nke a na onye ọrụ gị. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịbịakọta nkwekọrịta ọnụ yana onye ọrụ gị na-ekwusi ike na ya enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla, ndụmọdụ a bụ ịnakwere akụkọ ezumike ọrịa wee jụọ dọkịta ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ dọkịta ahụike na nchekwa ọrụ ozugbo maka ndụmọdụ banyere ịdị mma nke onye ọrụ gị maka oru nke aka ya, ma obu maka oru kwesiri ekwesi.
Were n'ọrụ na-arịa ọrịa site na nzube ma ọ bụ mmejọ nke onwe
Enwere ike inwe ọnọdụ ebe onye ọrụ gị na-arịa ọrịa site na ebumnuche ma ọ bụ mmejọ nke onwe. Dị ka ihe atụ, i nwere ike iche gbasara ebe onye ị na-arụrụ ọrụ na-awa ahụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa n'ihi ị alcoholụbiga mmanya ókè. Iwu kwuru na, dị ka onye were gị n'ọrụ, anaghị akwụ gị ụgwọ ịnọgide na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ kpatara site na nzube nke onye ọrụ. Otú ọ dị, a ghaghị ịhụ nzube a n'ihe metụtara na-arịa ọrịa, na nke a ga-abụrịrị adị otú ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ọ na-esiri gị ike dị ka onye were gị n'ọrụ igosipụta nke a. Maka ndị were gị n ’ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ ihe kariri nke kachasị nke iwu ma ọ bụrụ nrịanrịa (70% nke ụgwọ ọrụ), ọ bụ ihe amamihe dị na ya itinye na nkwekọrịta ọrụ na onye ọrụ enweghị ikike akụkụ iwu nke ụgwọ ọnwa n'oge ọrịa, ọ bụrụ ọrịa na-ebute mmejọ ma ọ bụ nleghara anya nke onye ọrụ ahụ.
Were n’ọrụ na-arịa ọrịa n’ihi esemokwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ntụle na-adịghị mma
Ọ bụrụ n ’ị na-eche na onye ọrụ gị na-ekpesa ọrịa n’ihi esemokwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ntụle na-adịghị mma n’oge na-adịbeghị anya, ọ bụ ihe amamihe iji soro onye ọrụ gị kwurịta ya. Ọ bụrụ na onye ọrụ gị anaghị emeghe mkparịta ụka, ọ bụ ihe amamihe ịnabata akụkọ gbasara ọrịa wee kpọọ ozugbo na dọkịta ụlọ ọrụ ma ọ bụ dọkịta ahụike na nchekwa ọrụ. Dọkịta ahụ ga-enwe ike ịchọpụta ma onye ọrụ gị enweghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-adabaghị adaba ma nye gị ndụmọdụ gbasara ohere ị nwere ike iweghachi onye ọrụ gị ọrụ ozugbo enwere ike.
Nweghị ozi zuru oke iji nwee ike nyochaa akụkọ ọrịa
Inweghị ike ịkwado onye were gị n'ọrụ ịkpọsa ụdị ọrịa ọ na-arịa ma ọ bụ ọgwụgwọ ya. Ọ bụrụ na onye ọrụ gị anaghị ekpughe ihe a, nke a abụghị ihe kpatara ịjụ ịkọ ọrịa ya. Ihe gị, dịka onye were gị n'ọrụ, nwere ike ime n'okwu ahụ bụ ịkpọ dọkịta ụlọ ọrụ ma ọ bụ dọkịta na ahụike na-ahụ maka ọrụ ozugbo enwere ike. Agbanyeghị, onye ọrụ ahụ ga-ekwenye na nyocha nke dọkịta ụlọ ọrụ ma ọ bụ dibia ahụike na nchekwa ọrụ yana ịnye ha ozi (ahụike) dị mkpa. Dịka onye were gị n'ọrụ, ịnwere ike ịjụ mgbe onye ọrụ gị na-atụ anya inwe ike ịlaghachi ọrụ, mgbe na otu esi enweta onye ọrụ ahụ, ma onye ọrụ ahụ ka nwere ike ịrụ ụfọdụ ọrụ yana ma ọrịa a akpatala n'aka ndị ọzọ nwere ikike .
Na-enwe obi abụọ gbasara ọkwa onye ọrụ gị banyere ọrịa ma ọ bụ na ị maghị ma ị ga-akwụ ụgwọ ịnọgide na-akwụ ụgwọ? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu na-ahụ maka ọrụ nke Law & More ozugbo. Ndị ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ ziri ezi ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nyere gị aka n'okwu ikpe.
Previous Post Omume arụkwaghịm
Next Post Ongwọ maka imeziwanye mmekọrịta